トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Good sei scry kuziva mweya naye? (Vachishandisa, nyeredzi, nemichindwe kuverenga, telepathy, zvakadai semidzimu vanoona)
Somuenzaniso, vanhu vakanga anoda vari kufambidzana ikozvino kuda kuziva kana mweya mumwe wematambudziko kwaizova zhinji. Vanhu kuti ndinoda zvino ndinofunga tiri vanoda kuva mweya naye.
anobva mhinduro kunyange kutaura nevamwe vanhu pamusoro mweya naye, kana zvokushopera kuti tione mugumo, mweya naye uye kana kusangana, unokwanisa kuti kutamba kusvikira zviri chii vanhu kuita. Kana wanga usati akasangana mweya naye, unogona zvakare kushandisa nokuvuka kuti kugadzirira kusangana kubva ikozvino. By
zvokushopera kuti vawane mashoko mweya wako, zvichava nyore kuwana shamwari. Uyezve, pane nyaya zvino anoda hausi mweya wako, kana kuti kuputsa, unogona kuona uye kuti mamiriro ezvinhu Kuyerera zvaunoreva nokuvuka. Vanhu vari kufambidzana
ikozvino uye vanhu vari mwoyo kuziva kana mweya mumwe, ngationei unotofanira vanoshandisa nokuvuka. In
chikamu rubatsiro kutsvaka zvinhu uye soulmate zvakasiyana siyana kuvuka
, ndinofunga Chii kurumbidzwaka uku kuti nokuvuka kutsvaka mweya naye.
yave kuzivikanwa somunhu kadhi nokuvuka ndiyo kadhi vachishandisa. Vachishandisa kadhi inoshandisa kadhi wakavhomorwa rakasiyana pamufananidzo, ndizvo pfuma yaMwari kuburikidza tichibatanidza zvinoreva kuti hwakaiswa pamufananidzo uye kumusoro uye nechepasi chinzvimbo. By dzakarukwa zvakanaka kududzira zvinoreva kadhi, unogona kufanoona pamusoro mweya naye.
ari nyeredzi hwakadzama kupfuura horoscope, ndizvo Mwari, kusanganisira ukama pakati nemapuraneti siyana. Zita renyeredzi sechiratidzo, mapuraneti uye zviratidzo ukama, uyewo kuudza munhu zvaari uye kufembera pachishandiswa positional ukama pakati mapuraneti. Nokuti zvingadarowo kufanotaura nzvimbo mberi kubva placement kwenyeredzi, uchazonakidzwa kufunga chii mweya naye uye kana kusangana pose.
- chanza kuverenga
ndinofunga haisi vanhu vakawanda imomo kuti makaona kuti muchato mitsetse muchanza. Marriage mitsetse, kuti kubva pasi muchanza duku nomunwe mutsetse uri pakati mupfungwa mutsetse, chinzvimbo uye ukobvu ari mutsetse, panguva urefu, nezvimwewo, unogona kutsvene chii nguva worudzii muchato kumativi. Uyezve, vanhu vane kuumba nemichero kuverenga uye maoko akafanana kwave akatiwo kuti pane mukuru mukana mweya naye.
telepathy zvichiitirwa kuverenga kwomunhu ramangwana uye mafungiro nokushandisa rechitanhatu pfungwa mhiri pfungwa shanu vanhu. Mano, nokuti inogona kunzwa sefungu mweya naye muri kutsvaka kwete chete vanhu kuwana upfumi, unogona kuwana imwe nokuvuka yakarurama kunoguma. Uyezve, unogona kuona zvakare kunzwa kana munhu achishamisika sei chandinopomerwa. Muchishandisa
zvokufuridzirwa, ndiyo chiratidzo mumudzimu ezvinhu yaiva mhiri nguva uye nzvimbo inogona mufanidziro sezvo vhidhiyo. Kwete chete kuti chomudzimu wenyika, dzakadai kuitika vanhu uye zviitiko zvenyika ino, unogona kuona kare, uye ramangwana. Somugumisiro, iwe unopa mhanza uye kana mamiriro kana akasangana mweya wako, pane mukana kuti Kusangana mune ramangwana. Ndinogona kutaura zvavo kana pasi
nokuvuka kuti kunodiwa kana kugamuchira
siyana nokuvuka, somugumisiro nokuvuka kubudikidza mudzidzisi aite nokuvuka ndechokuti zvakasiyana. In vakawanda pakati kufembera kuva nokuvuka zvakafanana nzira, zvingaita mumwe nomumwe kana mugumisiro zvakasiyana.
Uyezve ungasazviziva kunaka mugumisiro anobuda, asi haufaniri kuwa. Chete uzvione achengeterwe reference, ndiko kuti kushandiswa kurumbidza kuti nokuvuka tonotora kurutivi migumisiro yakanaka.
Unogona kufungidzira. Uyezve, vanhu vane kuumba nemichero kuverenga uye maoko akafanana kwave akatiwo kuti pane mukuru mukana mweya naye.